Sony, Samsung & Other Technology: How To Use Mobile ODIN For Installing Firmwares,CWM And Kernels
Use on PC
How To Use Mobile ODIN For Installing Firmwares,CWM And Kernels
Mobile Odin Pro ကိုအသုံးပြုပြီး မိမိဖုန်းမှာ Official Firmware တင်မယ် CWM Recovery သွင်းမယ်။
သူ့ကိုအသုံးပြုပြီးFirmware တင်ခြင်းအားဖြင့် မိမိဖုန်းဟာRoot ကိုအလွယ်တကူလေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့Mobile Odinဆိုတဲ့ Application လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Application လေးကတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်ပါတယ်။ သူ့ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်မိမိဖုန်းဟာ Root လုပ်ပြီးသားတော့ဖြစ်ရပါမယ်။ပြီးတော့ မိမိဖုန်းဟာ Android version 2.1 နှင့်အထက်ရှိရပါမယ်။မိမိမှာကွန်ပျုတာမရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်အရမ်းကိုအဆင်ပြေစေမှာပါ။ဖုန်းနဲ့ပဲ Firmware ကိုဒေါင်းပြီးဖုန်းထဲမှာပဲFirmware ကိုအလွယ်တကူလေးတင်နိူင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆော့ဝယ်လေးကို Google Play Store မှာတော့ ဒေါ်လာ$4.99 ဖြင့်ဝယ်ယူအသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး Myanmarmobile App Store တွင်Free download ရယူအသုံးပြုနိူင်ပါသည်။ အောက်ကလင့်ခ်တွင်ရယူနိူင်ပါသည်။
Mobile Odin Pro V.3.76အားရယူရန်
ဒီဆော့ဝယ်လေးကိုအသုံးပြုနိူင်တဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားတွေကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည်. လိုက်ပါအုံး။
Samsung Galaxy Note 8.0″:
Samsung Galaxy Note 10.1″:
- Tab 7″ GT-P1000
- Tab 7.7″ GT-P6800, GT-P6810
- Tab 10.1″ GT-P7500, GT-P7510
- Tab27″ GT-P3100, GT-P3110, GT-P3113
- Tab210″ GT-P5100, GT-P5110, GT-P5113
မှတ်ချတ်—– အခုနောက်ဆုံး Samsung Galaxy Note3 N9005 ကိုပါအထောက်အပံ့ပေးထားတယ်လိုသိရပါတယ်ခင်ဗျ။
Flashable .zip files are not supported in Mobile ODIN.(.Zip file ကိုအသုံးပြုမရပါ)
Only files for Kernel, System, Data, Cache, Param, Modem, and Hidden files are supported(ဖော်ပြပါ ဖိုင်အမျိုးအစားများကိုသာအသုံးပြုနိူင်ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် md5.tar ဖိုင်အမျိုးအစားကိုသာအသုံးပြုရပါမည်။)
Mobile ODIN does not flash PIT, IBL/PBL, SBL, and EFS(ဒီလိုဖိုင်အမျိုးအစားတွေကို Flash လုပ်မရပါ)
After flashing official firmware, you will only get SuperSU. You may need to flashaseparate CF-Root kernel to gain CWM Recovery and CWM Manager. You can flash CF-Root using Mobile ODIN like me (မိုဘိုင်းအိုဒင်းန် ကိုအသုံးပြုပြီး Firmware Flash လုပ်ပါက Root ကို Auto(Super Su) ရရှိမှာဖြစ်ပြီး .CWM Recovery ကိုတော့မိမိကိုယ်တိုင် Mobile Odin ကိုအသုံးပြုပြီးတင်နိူင်ပါသည်)
Mobile Odin Pro ကိုအသုံးပြုပြီး Firmware တင်တဲ့အခါမိမိဖုန်းရဲ့ Binary Count အရေအတွက်ကလုံးဝကိုတိုးမလာပါဘူး။ပြီးတော့ Yellow Triangle Sign လည်းမပေါ်တော့ပါဘူး။
မိမိတင်မယ့် Firmware ကိုဒေါင်းလော့လုပ်ပြီး Firmware zip ကို extract လုပ်ပြီး ရလာတဲ့ md5.tar ဖိုင်ကိုမိမိဖုန်းရဲ Internal or့ External SD ကဒ်ထဲမှာထဲ့ပေးထားပါ။
(Firmware zip ဖိုင်ကိုရွေးပေးပြီးတင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမယ့် mobile odin ကထပ်ပြီးမိမိဖုန်းထဲမှာextract ထပ်လုပ်ပေးပါသည်)
Launch Mobile ODIN
မိမိဖုန်းတွင်ထဲ့သွင်းထားသော mobile odin pro အားဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။ Super user access တောင်းလျှင် Grant လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
Select “Open file …”
Open File ကိုနှိပ်ပေးပြီးမိမိအသုံးပြုမယ့် Extract လုပ်ပြီးသား firmware file–>> md5.tar ဖိုင်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ.(မိမိရဲ့Firmware ဟာ Full File ပါတဲ့ Firmware ဖြစ်နေပါကလည်း Code လို. ရေးထားတဲ့ md5.tar ဖိုင်တစ်ခုတည်းကိုပဲရွေးပေးလိုက်ပါ)။comment box တစ်ခုမေးလာလျှင် OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
တစ်ကယ်လို. မိမိရွေးပေးလိုက်တဲ့ firmware fileဟာမှားလားမှန်လားသေချာလေးစစ်ပေးပါ။ မှားသွားတယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့။ Open File ရဲ့အောက်က Clear All ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
Make sure EverRoot is ticked (Pro users only)
EVER ROOT ရဲ့အောက်ကပြထားတဲ့၃ ခု ကို အမှန်ခြစ်ပေးရပါမယ်။
Inject Mobile ODIN
(ဒီအဆင့်မှာတော့ မိမိဟာ Official firmware ပဲသုံးမယ် Root မလုပ်ခြင်ဘူးဆိုရင်တော့ အထက်ပါ ၃ခုကိုအမှန်ခြစ်ပေးစရာမလိုပါဘူး။)
နောက်တဆင့်မှာတော့ Root လုပ်သည်ဖြစ်စေ Root မလုပ်သည်ဖြစ်စေ လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။
Select “Wipe data and cache” and “Wipe Dalvik cache”
အခုနောက်ဆုံးအဆင့်မှာ FLASH ရဲ့အောက်က Flash Firmware ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။အဲ့လိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်မိမိထဲ့ထားတဲ့ md5 ဖိုင်ကိုမှန်မမှန်စစ်ခိုင်းပါလိုက်မယ်။ကိုယ်ထဲ့ထားတာမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ SKIP ကိုနှိပ်ပြီးကျော်သွားနိူင်ပါတယ်။ စစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ CHECK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်လျှင်တော့ဖိုင်ကိုစစ်ပေးပြီးလျှင်ဖုန်းကFirmware Flash လုပ်ရန်အတွက်Auto reboot ကျသွားပါလိုက်မယ်။
ပြီးလျှင်အပြာရောင်စက်ရုပ်ပုံလေးတက်လာပါမယ်။ ပြီးလျှင် ခေတ္တစောင်. နေလိုက်ပါ mobile odin က auto လုပ်ဆောင်ပေးနေပါလိမ်. မယ်။အားလုံးပြီးသွားလျှင်ဖုန်းက လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကိုအော်တိုအင်စတောလုပ်ပေးနေပါမယ်။Flashing Firmware ကိုသွင်းနေစဉ်မှာပဲမိမိဖုန်းကိုတစ်ခါတည်း Root ကိုပါလုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။Auto Installing ပြီးသွားလျှင်တော့မိမိဖုန်းလေးဟာ Firmware အသစ်ကလေးနဲ့(Rooted)ပါရပြီးလန်းနေပါပြီ။
Mobile Odin Pro ကိုအသုံးပြုပြီး CWM Recovery တင်မယ်
Cwm Recovery ဟာ .tar ဖိုင်ဖြစ်ရပါမယ်။ဖိုင်မှန်ပြီဆိုလျှင်တော့ mobile odin pro ကိုဖွင့်ပြီးလျှင် Kernelကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီး CWM Recovery .tar ဖိုင်လေးကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ပြီးလျှင် Flash Firmware ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဖုန်းကAuto Reboot ကျသွားပြီးပြန်တက်လာပါလိမ်. မယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့။ မိမိဖုန်းကို vol up+home+power ကိုနှိပ်ပြီး Recovery Mode ကိုဝင်ပြီးစစ်လိုက်ပါ။ Custom CWM Recovery လေးသွင်းပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။
Myanmar Mobile APP STORE မှကူးယူဖော်ပြထားပါသည်
Special Thanks to Ko Aung Bo Bo Lwin (MMUG)
Posted by Kaung MYat at 5:00 PM
Labels: APK, Tutorials
လူဝင်စာရင်းကို (30.10.2013) 23h:35m မှာစတင်ထားရှိပါတယ်
Blog မှာအသစ်တင်တိုင်း FACEBOOK မှာပေါ်ချင်ရင် အောက်က LIKE ကိုနှိပ်ခဲ့ပါ
All Apple Firmware Here !!
(Day ParTY) MIX - DJ Kaung MYat
Party တွေ သွားတတ်သူများ အတွက် ... အထူးသဖြင့် ... Day Party ပေါ့နော် ..။ အဲ့လို သွားတတ်တဲ့ သူတွေ အတွက် အခု (DayParTY) MIX လေး တစ်ပုဒ် Non-Sto...
V-Root Version 1.7.3 with English Language (New Update)
V-Root Version 1.7.3 with English Language (New Update) V-Root ကို Update Version လေးထပ်မံထွက်လာပါပြီ။ တရုတ်လိုလုံးဝမကြိုက်တဲ့သူများ...
Pro Myanmar Root For Android (APK)
Pro Myanmar Root For Android (APK) တရုပ် Root Tool လေးကို အလွယ်နားလည်အောင်ဘာသာ ပြန်ရေးပေးထားပါတယ် တရုပ် Root တွေမှာ Root လုပ်လိုက်ရင်...
Galaxy Grand CDMA (SCH-I879) ကို eSurfing Logo မပါတဲ့ Original Firmware တင်မယ်
Samsung Galaxy Grand (SCH-I879) ကို eSurfing မပါတဲ့ Original Firmware တင်နည်း အရင်ဆုံး Firmware တင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့...
Galaxy Note2(SHV-E250S) LTE Korean အလုံး 4.4.2 Kitkat Official Firmware
Samsung Galaxy Note2(SHV-E250S) Korea အလုံး ကို Official Kitkat 4.4.2 တင်နည်း အရင်ဆုံး Firmware တင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်လေးကို ဒေါင်...
ဒီ Blog ရဲ့ APK အား အောက်က ပုံ ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ရယူပါ
!! All Posts Are Here !!
Bus Simulator v 3D 1.7.0 for Android
V-Root Version 1.7.4 with English Language (30/12/...
Carrier Change လုပ်ဖို့ (For Android) 100% Good (R...
ကြောင်လေးနဲ့ ဆော့ကစားဖို့ My Talking Tom
Pattern,PIN and Password Lock ကျသူများအတွက်
Zapya PC Version ကို Portable လေးလိုချင်သူတွေအတွက်...
Grand Thief Auto: SanAndreas For Android v1.0.2 (A...
happy new year မှာ DJ အလန်းလေးတွေနဲ့လန်းချင်တဲ့သူင...
zapya အသုံးပြုသူတွေအတွက် zapya update လေးပါ
iOS7Untethered Jailbreak wtih evasi0n (SUPPORT i...
Computer PC မှာသုံးဖို့အတွက် Viber PC v4.0.2.30 မြ...
Android Game တော်တော်များများကို ပိုက်ပိုက် Hack ဖ...
Android ဖုန်းတွေ အတွက် ANDROID USB DRIV3RS FOR WIN...
Miloshare မှာ တင်ထားတဲ့ File တွေကို ဒေါင်းနည်း
zapya သုံးသူများ အတွက် computer zapya.exe
Galaxy Note2GT-N7100 (4.3) Official THL
Youtube Updated Version For Android (v 5.3.28)
ရန်ကုန်လမ်းညွန်လိုမျိုး Sea Game အတွက်ထုတ်ပေးထားတဲ...
Android APK တွေကို Computer သုံးပြီးအလွယ် Install ...
Tango Messenger, Video & Calls v3.3.71043 အသစ်လေးပ...
Ringtune (or) Y-Tune အသုံးပြုသူများ Service Center...
မြန်မာ ဘောလုံးပွဲ ကြည့်ပြီး နည်းပြ "ပတ်ဆောင်ပွာာ" ...
Facebook Messenger v3.2.1 release For ANdroiD
OfficeSuite Pro7(PDF & HD) For Android (Full)
စက်ရုပ်သမားများအတွက်viber နောက်ဆုံးversion လေးပါ
Galaxy S3 (GT-I9300) ရဲ့ Download Mode ထဲက Flash C...
iDevice ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေ အတွက် APN Setting
Xperia Z C6603 ကို Leaked 4.3 with Build 10.4.B.0....
Angry Birds Star Wars II Version အသစ်လေး (Primium)...
MOBILE GO FOR ANDROID 4.2.0 FULL (NEW ) 11.12.13 U...
Angry Birds Go! (APK + OBB Data) Full
iOS7မှာ စက်လေးနေသူတွေအတွက် လို၊ တိုး၊ ပို၊ လျော့...
Zapya, Flash Transfer တို့လိုမျိုး SHARING လုပ်တြာ...
Zawgyi-One FlipFont (New) Support Android 4.2.2 & ...
Galaxy Note3 SM-N9005 (4G LTE) 4.3 Jellybean Build...
Android Tuner v0.9.7 APK
C8813D Official Firmware (V100R001C92B175) လေးပါ
Viber စက်ရုပ်ဗားရှင်းက Message တွေကို BACK UP ယူဖိ...
Wheres My Water2APK (MOD)
ကွန်ပြူတာ ကို ဒီ ကောင်လေး သုံးပြီး အလွယ်ပိတ်မယ်
iOS သမားတွေ 3rd Party Software တွေသုံးပြီး iTunes ...
iTools 2013 v1115beta (New Updated Version) Suppor...
MPT Service v1.2 (December 3, 2013 Update)
ADB ကို အသုံးပြု ပြီးရေးထားတဲ့ Bat ဖိုင်မှာ အတက်မျ...
Android OS Version 4.2 နှင့် အထက်မှာ USB Debugging...
File တွေ ကို Convert လုပ်ပေးတဲ့ Format Factory 3.2...
Custom recovery မလိုပဲ Recovery Image, Boot Image,...
How To Use Mobile ODIN For Installing Firmwares,CW...
[SSOT]. Theme images by Kaung Myat. Powered by Blogger.